Azịza ọsọ ọsọ gị na-ajụkarị ajụjụ SEO
Iji mee ka saịtị gị dị na SERP, ị ga-amara ntakịrị karịa naanị njikwa njikwa search njirimara okwu na otu esi emetụta ọnọdụ gị. Iji wuo mgbasa ozi kachasị emeri ma ọ bụ nyochaa ọrụ nke ndị ọkachamara SEO gị, ịkwesịrị ịmatakwu ihe ọmụma gbasara ụkpụrụ na usoro nyochaa weebụsaịtị.Ya mere, ka anyị kwuo banyere ihe dị mkpa SEO ọtụtụ ndị na-amalite ịjụ ajụjụ gbasara ụzọ mmepe weebụsaịtị ma ejighị n'aka onye ga-ajụ maka nkọwa.
TOP na-ajụkarị ajụjụ gbasara SEO
Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti nyocha anụ ọhịa na ụgwọ?
Nchọpụta ma ọ bụ nsonaazụ ntinye anya bụ ndị na-apụta na TOP nke SERP ma nwee akara "Mgbasa Ozi. "N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe ndị a nwere ike ịpụta n'akụkụ akụkụ SERP. Ndị a bụ ngalaba na ndị na-akpọsa ngwá ọrụ na-akwụ ụgwọ ka ha bịa na TOP nke dịgasị iche iche engines ọchụchọ maka ajụjụ njirimara dị mkpa. Iji nweta nchọpụta akwụ ụgwọ, ịkwesighi ịmepụta mgbasa ozi kachasị mma. Ihe niile ị chọrọ bụ iji kwụọ ụgwọ maka ibe onye ọrụ ọ bụla na ad mgbasa ozi gị. Ụdị ọkwa a na-akpọ ụgwọ a na-akpọ mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ-na-click ma jiri ya na-adọta ndị ọbịa ọhụrụ na ọchụchọ ma bulie ọnụego ntinye.
Nchọpụta mkpụrụ osisi ma ọ bụ na-akwụghị ụgwọ na-ezo aka na nsonaazụ anụ ọhịa ndị na-egosi na engines ọchụchọ site na njikarịcha njikwa kacha mma. E nwere ike ịchọta isi iyi weebụ nke etinyebere na TOP nke ọchụchọ ọchụchọ site na mkpa, àgwà, na SEO-friendliness. A ga-ahapụta ebe nrụọrụ weebụ TOP dịka usoro nyocha ọ bụla. Site na iduga na nyocha organic, ị na-azụlite ohere gị iji melite àgwà gị ma na-adọta okporo ụzọ dị mma nke ga-agbanwe n'ime ahịa.
Ego ole ka m ga-akwụ maka ọrụ SEO?
Ọrụ nyochaa njirimara search engine nwere ike ịdị iche iche n'ụdị azụmahịa gị, niche ahịa gị na ogo nke njikarịcha (mpaghara, mba, ụwa). Ọzọkwa, ọnụahịa na-adabere na ikike njikwa na-eweta ikike na aha njirimara. Ọ bụrụ na ọ bụ onye a maara nke ọma na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ụwa, mgbe ahụ, ọ ga-abụrịrị na ọnụahịa nke ọrụ ha ga-adị elu karịa ọnụ ahịa ahịa ahịa. Otú ọ dị, a ga-akwụ ụgwọ niile ị na-etinye na spades. Ọ bụ ya mere ị ga-eji ghara inwe obi abụọ gbasara ọnụahịa mgbasa ozi kachasị mma.
Akwụsịla maka ụlọ ọrụ ndị na-enye SEO ọnụahịa dị ọnụ ala. N'ọtụtụ ọnọdụ, enwere ọganihu na-enweghị isi n'azụ ya. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ ndị a na-eji usoro oji SEO na-agba ọsọ iji rụpụta ihe ngwa ngwa. Otú ọ dị, ọ nwere ike iduga ahụhụ Google na ọkwa ọnụahịa.
Ozugbo m bidoro SEO, ole ka m ga-echere iji chọpụta nsonaazụ ọma mbụ?
SEO bụ oge na-ewe oge nke chọrọ oge na mgbalị. A pụghị imepụta ya n'otu ntabi anya. Ọ na-ewe site na 6 ruo 9 izu imezu ihe niile dị mkpa SEO atụmatụ na ọtụtụ ọnwa mgbe niile mmezi na-raara nye mmelite ahịa. Ndị na-achọ crawlers nyocha chọrọ oge ụfọdụ ịkọ na depụtagharịa ebe nrụọrụ weebụ gị iji nweta saịtị gị na ọkwa dị elu na SERP. Dabere na niche ahịa gị, ọtụtụ saịtị na àgwà njikarịcha, ọ na-ewe site na 6 ruo 9 ọnwa iji malite ịmepụta nsonaazụ SEO mbụ Source .